Ungazigcina njani iZithuba kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 338
Ngalo lonke ixesha ungena kwiakhawunti yakho ye-Instagram, uya kufumana inani elikhulu lezithuba kwixesha lakho. Inani lokupapashwa liya kulingana nenani labalandeli kwaye kulandelwe onayo kwiakhawunti yakho. Oku kugcina ixesha lakho lihlaziywa rhoqo.
Ke unokuphoswa ziimpapasho ezininzi ezingaphantsi kakhulu kulandelelwano lwamaxesha, kwaye uchitha ixesha elininzi uzijonga. Kwakhona, unokufumana ngokulula ingqalelo yakho kwisithuba osifumene kwiprofayili osandula ukufumanisa kwaye awufuni kuyilandela.
Uninzi lwezi mpapasho zinomdla kwaye uya kufuna ukuzigcina ukuze uzonwabele ngakumbi. Ngokukodwa xa ukhetho lokwabelana ngokupapashwa lungalungiswanga kwi-Instagram.
Oovimba abagcina i-Instagram
El Inkqubo yokugcina iposi Kulula kakhulu ukwenza ngaphakathi kwesicelo se-Instagram nakwiqonga lewebhu.
Ngena kwi-Instagram ngedatha yakho ukusuka igama eligqithisiweyo kunye negama lomsebenzisi.
Uya kuzifumana ngokwamaxesha eakhawunti yakho kwaye uza kubona lonke ushicilelo olukhoyo uthumele abalandeli bakho.
Kwimpapasho nganye uya kufumana i-ayikhoni emile ngathi ilibhoni kwikona esezantsi ekunene. Ngokucinezela le icon, upapasho luya kugcinwa ngokuzenzekelayo kwimemori yesicelo.
Fikelela kwizithuba ezigciniweyo
Ukufikelela kupapasho olugcinileyo ngelo xesha, kufuneka uqale ufake iprofayile yeakhawunti yakho. Emva kokungena, khangela i icon ukufikelela kwiprofayili yakho okanye ungene kumfanekiso weakhawunti yakho, ukuba ungene ngeqonga lewebhu.
Nje ukuba ungaphakathi kwiprofayile yakho, beka i icon enemigca ecaleni kophawu olumileyo kwikona ephezulu ngasekunene konxibelelwano.
Emva kwexesha, xa isithuba esivelayo sibonisiwe, uya kubona icandelo "eligciniweyo". Ngokungena apha, uya kufumana lonke ushicilelo oluhlanganisiweyo ngokwendlela efinyeziweyo. Cofa kuyo, zonke iimpapasho ziya kuboniswa kwaye unokukhetha nayiphi na ofuna ukuyibona.
Okwangoku, uya kukwazi ukucima ukugcina upapasho, ucinezela i-icon ebisetyenziselwa ukuyigcina. Xa ubuyela kwimenyu ngazo zonke izithuba ezigciniweyo, awusayi kuphinda uyifumane le uyicimileyo.
Imisebenzi yokukhetha ukugcina umxholo
Kwi-Instagram unokufumana elinye okanye elinye iqhinga lokugcina iimpapasho onomdla kuzo. Ungathumela omnye ngomyalezo othe ngqo kumhlobo wakho.
Unokukhuphela umxholo wopapasho ngokusebenzisa abaphathi abakhupheleyo kwi-Intanethi kunye nokusebenzisa usetyenziso olufakwe kwifayile ye- device.
Kwiwebhu uya kufumana amaphepha anje ngo-https: //es.savefrom.net/download-from-instagram, apho uncamathisela i-URL yokupapashwa kwe-Instagram kwaye ungayikhuphela kwimemori yesixhobo, nokuba ngumfanekiso okanye ividiyo. Unokuthatha ithuba le-Snaptube okanye i-AVD donwloader ukukhupha umxholo wemithombo yeendaba kwi-Instagram ngqo kwiselfowuni.
Ezi zizicelo ozifumana ngqo kwivenkile yesicelo ye izixhobo
1 Oovimba abagcina i-Instagram
2 Imisebenzi yokukhetha ukugcina umxholo
Uyenza njani kwaye uyithumele eyakho i-GIFs kwiTelegram?